မွန်ဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော မွန်လူမျိုးတို့အသုံးပြုသည့်အရှေ့တောင်အာရှသုံး ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွန်ဘာသာစကားသည် ကမ္ဘောဒီးယား ဘာသာစကားနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသရှိ ဘာသာစကား အများစုကဲ့သို့ အသံအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျရှိသော ဘာသာစကားမဟုတ်ပေ။ ယနေ့ မွန်ဘာသာစကားကို လူဦးရေ တစ်သန်းနီးပါးက ပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များကမွန်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုမှာ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်အတွင်း လျင်မြန်စွာကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ မွန်မျိုးနွယ် အများစုသည် ဗမာဘာသာစကား တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ပြောဆိုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွန်ဘာသာစကား ပြောဆိုသူအများစုသည် မွန်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး တနင်္သာရီတိုင်း နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တို့တွင်လည်း မွန်စကားကို ပြောဆိုကြသည်။ မွန်စာပေ အရေးအသားသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဗြဟ္မီအရေးအသား မှဆင်းသက်လာသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ နှင့် အရှေ့ပိုင်းဒေသများ
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မွန်ဘာသာစကားသည်အ​နော်ရထာ​ခေတ်​နောက်ပိုင်း​ပေါ်​ပေါက်လာ​သော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အေဒီ ၁၂ ရာစု တိုင်​နှောင်းပိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း အောက်ပိုင်း တောင်ကြား မွန်မင်းနေပြည်တော်များ အတွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၀၅၇ ခုနှစ်တွင် မွန်တို့သည်ခမာတို့ကိုစစ်ရှုံး၍ သထုံသို့နေပြည်တော် ရောက်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာပြည်၌ စတင်သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်သာ်။ဘာသာစကားဖြစ် ခဲ့သည်။ပုဂံဘုရင်ကျန်စစ်သားမင်း(၁၀၈၄၁၁၁၂)သည် မွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးခဲ့ပြီး မွန်ဘာသာစကားကိုအားပေးချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာစာပေအရေး အသား ခိုင်မာရှိ​နှင့်​နေပြီးဖြစ်ကာ ဖြစ်ခဲ့သည်။မြန်မာနှင့်မွန်ဆက်သွယ်​ရေးလွယ်ကူ​စေရန်နှင့်လူနည်းစုမွန်လူမျိုးတို့အားအား​ပေးချီး​မြှောက်ရန် ကျန်စစ်သားမင်းသည် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော များစွာသော ကမ္ဗည်းကျောက်စာများကိုထားရစ်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ပါဠိ၊ ပျူ၊ မွန် နှင့် မြန်မာစာတို့ဖြင့် မျက်နှာလေးဖက်တွင် အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်ကြောင်း တစ်ခုတည်းကို ဖော်ပြရေးသားထားသော ရာဇကုမာရ် ရေးထိုးခဲ့သော မြစေတီကျောက်စာကို ထွင်းခဲ့သည်။သို့ရာတွင် ကျန်စစ်သားမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် မွန်ဘာသာစကား အသုံးပြုမှုမှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ မွန်နှင့်ပျူတို့အစားရှေးဗမာဘာသာစကားကို ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင်ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား အဖြစ် စတင် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။
ပျက်သုဉ်းသွားသော ဒွါရဝတီမင်းနေပြည်တော်မှ မွန်ကမ္ဗည်းစာများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန့်ကျဲနေသည်။ သို့ရာတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသူများမှာ မွန်၊ မွန်နှင့်မလေး ကပြားများ၊ သို့မဟုတ် ခမာများ ဖြစ်ကြသည်ဟူ၍ကား ရှင်းလင်းကွဲပြားမှု မရှိပါချေ။ နောက်မှပေါ်ပေါက်လာသော ကမ္ဗည်းစာများနှင့် လာဗိုကဲ့သို့သော မင်းနေပြည်တော်များတို့မှာ ခမာတို့ လက်အောက်ခံဖြစ်ကြသည်။ ပုဂံကျရှုံးပြီးနောက် မွန်ဘာသာစကားကို ယခုခေတ် အောက်မြန်မာပြည် ဖြစ်သော လွတ်လပ်သည့် မွန်မင်းနေပြည်တော် ဟံသာဝတီ ပဲခူး (၁၂၈၇-၁၅၃၉) တွင် ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကားအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။
၁၈၅၂ ခုနှစ် အောက်မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှ တို့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ တွင်လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လာရောက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို အားပေးခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းသို့ အိန္ဒိယ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ လူများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသော နေရာဒေသ များမှလူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်ခြင်းသည် မွန်ဘာသာစကားကို အဆင့် လျှော့ကျစေခဲ့သည်။ ကိုလိုနီဗြိတိသျှတို့ အုပ်စိုးခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း ဘာသာစကားမှာ နည်းပါးဆုတ်ယုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးအချိန်မှစ၍ ပြောဆိုသူအရေအတွက် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းမှုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆက်ခံသော မြန်မာအစိုးရတို့မှ ထောက်ပံ့မှု အနည်းငယ် သို့မဟုတ် လုံးဝမရရှိဘဲ မွန်ဘာသာစကား (အထူးသဖြင့် မွန်အရေးအသား) ကို အများစုအားဖြင့် မွန်ဘုန်းတော်ကြီးများက ဆက်လက် ပြန့်ပွားစေခဲ့သည်။ မွန်ဘာသာစကား သုံးစွဲမှုလမ်းညွှန်မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မွန်တော်လှန်ရေးသမားများ ထိန်းချုပ်သော နယ်မြေဒေသထဲ၌ ရှင်သန်နေပါသည်။ (နောက်ပိုင်ကာလတွင် မွန်ကျေးရွာများတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းထိကျောင်းများဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဆရာ/မ များကိုဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပေးခဲ့သလို အစိုးရပြဋ္ဌာန်းစာတွေလည်း သင်ကြားရပါတယ် မြန်မာစာကို မြန်မာလို သင်ပြီးသင်္ချာ၊ပထဝီ၊သမိုင်း၊သိပ္ပံ၊သဒ္ဒါ၊သင်္ဂြိုဟ် ကိုမွန်ဘာသာဖြစ် သင်ကြားရပါတယ်)
ပုဂံခေတ် စောလူးမင်း ကျောက်စာအား မြစ်သားမြို့၌ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် သက္ကရာဇ်ရေးထိုး မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကျောက်စာများအနက် အစောဆုံး ကျောက်စာတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ ကျောက်စာ၏ အရှေးမျက်နှာတွင် မွန်အက္ခရာနဲ့ ပါဠိဘာသာက (၈) ကြောင်းခန့်ရှိပြီး ကျန်တွေက မွန်ဘာသာဖြစ်သည်၊၊ ကျောဘက်မျက်နှာ ပထမဦးဆုံးအပိုင်း၌ နာဂရီအက္ခရာဖြင့် သက္ကတဘာသာက (၈) ကြောင်း၊ နောက်ပြီး အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအက္ခရာဖြင့် ပါဠိဘာသာက (၂၁) ကြောင်း၊ အောက်ဆုံးက ပျူအက္ခရာနှင့် ပျူဘာသာဖြင့် စာ (၇) ကြောင်းအသီးသီး ရေးထိုးထားသည်၊၊ ကျောက်စာတခုလုံးကို ကြည့်လျှင် အက္ခရာလေးမျိုး ဘာသာစကားလေးခုဖြင့် ရေးထိုးထားသော ကျောက်စာဖြစ်သည်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွန်လူမျိုးတို့နေထိုင်သည့် ဒေသအမျိုးမျိုးမှ လာသော ဒေသသုံး မွန်ဘာသာစကား အဓိက သုံးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာအလယ်ပိုင်းဒေသသုံးစကား (မုတ္တမ နှင့်မော်လမြိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ)၊ ပဲခူး နှင့် ရေး တို့ဖြစ်သည်။ အားလုံးမှာ အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်သည်။ ထိုင်းမွန်တို့တွင်မွန်တို့၏ မြန်မာဒေသသုံးစကားနှင့်ခြားနားချက်အချို့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှနားလည်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ဝေမှုများက မွန်ဒေသယိသုံးဘာသာစကားများကို အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းပြုစုထားသည်။
မုတ္တမ-မော်လမြိုင် ဒေသယိဘာသာစကား (အလယ်ပိုင်း)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌နေသော မွန်များ၏ ဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွန်ဘာသာစကားနှင့် ကွဲပြားမှု အချို့ရှိသော်လည်း အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်သွမ်းရှိသည်။ မွန်တို့၏ ထိုင်းဒေသယိဘာသာစကားများကို 'ပျောက်ကွယ်နိုင်သည့် စိုးရိမ်အနေအထား' ရှိသည်ဟုလည်း သတ်မှတ်ယူဆကြသည်။
ကွဲပြားသော စာလုံးအတော်များများနှင့် မြန်မာစကားတွင်မရှိသောအသံထွက်စနစ်ကိုပြသည့်အသံထွက်ကွဲအောင် စာလုံးပေါ်တွင်ပြသော အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုသည်။ အလယ်စာလုံး “လ” ၏ အသံထွက်ကွဲအောင် စာလုံးပေါ်တွင်ပြသော အမှတ်အသားကို စာလုံး၏ အောက်တည့်တည့်တွင် ရေးသည်။
နှုတ်ခမ်းပိတ် p pʰ ɓ t tʰ ɗ c cʰ k kʰ ʔ
သွားစိသံ s ç 1 h
နှာခေါင်းသံ m n ɲ ŋ
အာလုပ်သံ w l, r j
သရတို i ဣ u ဦ
သရအလတ်eဧ ə အး o အို
သရဆွဲအလတ် ɛ အယ် ɒ ɔ ဩ
သရဆွဲaအာ
ရှင်းလင်းသော (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းပြကြိယာ) အသံ၊ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်အမျိုးမျိုးက သာမန် မှ တကျွိကျွိ တကျွက်ကျွက် မြည်သောအသံ အထိတိုင်အောင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည်။
အသက်ရှူသံ၊ သရသံများတွင် ထူးခြားသော အသက်ရှူသွင်းသကဲ့သို့ အရည်အသွေးရှိသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါဥပမာမှာ အသံလေးလေးထွက်ရန် သရအက္ခရာပေါ်၌ ဖေါ်ပြထားသော အမှတ်အသား ဖြစ်သည်။
နာမ်များ နှင့် နာမ်ပုဒ်များ
အနည်းကိန်း နှင့် အများကိန်း
မွန်ဘာသာစကား နာမ်များမှာ ကိန်းဂဏန်းများအတွက် သရသံပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့၌ အနည်းကိန်းနှင့် အများကိန်းအတွက် သီးခြားပုံစံများမရှိပါ။
ရှင်းလင်းချက် ပန်းသီး တစ် လုံး
ရှင်းလင်းချက် ပန်းသီး နှစ် လုံး
အဲ ငါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် အူး
ဒဒက်တဴကဵုအဲ အကျွန်ုပ်၏ ဒယ်ဒက်တောင်ကောအူး
ဟိုန်အဲ အကျွန်ုပ်ကို ဟွန်းအူး
မိန်အဲ အကျွန်ုပ်သည် အူး
နူအဲ အကျွန်ုပ်ထံမှ နူအူး
ကုအဲ ငါ့အား၊ ကျွန်ုပ်အား' ကုအူး
ပိုဲ ငါတို့သည် ပွေ
ဟိုန်ပိုဲ ငါတို့ကို ဟွန်းပွေ
ကုပိုဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ကုပွေ
ဟိုန်တၠအဲ သင်ကို ဟွန်း
ဟိုန်မၞးတံ သင်တို့ကို တော့
ဒဒက်တဴကဵုမၞးတံ သင်တို့၏ တော့
ကုမၞးတံ သင်တို့အား တော့
မိန်မၞးတံ သင်တို့သည် တော့
နူမၞးတံ သင်တို့ထံမှ တော့
ၚ်ညးဂှ် ထိုသူသည် ညင့်ဂေါ့
ဒဒက်တဴကဵုညးဂှ် ထိုသူ၏ ကောညင့်ဂေါ့
ဟိုန်ညးဂှ် ထိုသူကို ညင့်ဂေါ့
ကုညးဂှ် ထိုသူအား ညင့်ဂေါ့
နူညးဂှ် ထိုသူသည် ညင့်ဂေါ့
ၚ်ညးတံဂှ် ထိုသူထံမှ ညင့်တောင်ဂေါ့
ဟိုန်ညးတံဂှ် ထိုသူတို့သည် ဟော့ညင့်တောင်ဂေါ့
အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှ ဘာသာစကားများကဲ့သို့ မွန်ဘာသာစကားတွင် အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းများရှိပြီး ကိန်းဂဏန်းများနှင့် တွဲဖက် ပေါ်ထွက်လာသော နာမ်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစားသတ်မှတ် ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ နာမ်ပါဝင်သော စကားလုံးများနှင့် ဝါကျများ၏ အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်သည်။
ရှင်းလင်းချက် ဘောပင် တစ် ချောင်း
ရှင်းလင်းချက် သစ်ပင် တစ် ပင်
အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများအတိုင်း မွန်ဘာသာစကား ဝါကျများအတွက် သမားရိုးကျစာလုံး အစီအစဉ်မှာ ကတ္တား-ကြိယာ-ကံ တို့ဖြစ်သည်။
IPA ʔoa ran hau toa ya.
ရှင်းလင်းချက် ကျွန်တော် ဝယ် ဆန် အဖြည့်စကား ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောသည့်စကား
IPA Nyeh tɔʔ paton kɒ ʔua pàsa ʔengloit
ရှင်းလင်းချက် တတိယနာမ်စား အများကိန်း သင် ကို ပထမနာမ်စား စာ အင်္ဓလိပ်စာ
'သူတို့ ကျွန်တော့်ကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးခဲ့သည်။'
ဟုတ်သည်-မဟုတ်ပါ မေးခွန်းများကိုဝါကျအဆုံးစကားလုံး ဟ ဖြင့်ဖေါ်ပြထားသည်။
IPA ɓè ʃìa pəng toa ya ha?
ရှင်းလင်းချက် သင် စား ထမင်း စကားဆက် ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောသည့်စကား အမေးစကား
Wh မေးခွန်းများဟုခေါ်သော ဘာကြောင့်ဟူသော အကြောင်းပြ မေးခွန်းမျိုးကို မတူညီသော ဝါကျအဆုံးစကားလုံး ရောင် ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အမေးဝါကျ စကားလုံးတို့သည် Wh မေးခွန်းစာလုံးများနှင့် အတူတွဲနေရန်မလိုပေ။အဓိပ္ပယ်မှာ ၎င်းမေးခွန်းစာလုံးကို ဝါကျရှေ့၌ထားရန်မလိုအပ်ပေ။
IPA Tala Ong kratkraw mu ràu?
ရှင်းလင်းချက် တာလာအောင်း လျှော် ဘာ အမေးစကား
Modern Mon at Ethnologue (18th ed., 2015)
Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Mon"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Old Mon"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
South၊ Ashley (2003)။ Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake။ Routledge။ ISBN 0-7007-1609-2။
Moseley၊ Christopher (2010)။ Atlas of the World's Languages in Danger (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ UNESCO။ ISBN 978-92-3-104096-2။